>ဆရာအောင်သင်း၏ စာပေဟောပြောပွဲများ | ချမ်းလင်းနေ
Filed under: စာပေဟောပြောပွဲများ — 8 Comments	February 20, 2011
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်ကပင် ထွန်းကားလာခဲ့သောကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့၊ ကိုယ်ပိုင် အစဉ်အလာများဖြင့် ရပ်တည်ရှင်သန်လာခဲ့သော လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပေသည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အချို့သောနိုင်ငံများတွင် ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သော ကိုယ်ပိုင်စာပေအရေးအသား အက္ခရာစာလုံးများမရှိကြပဲ မွေးစားအသံထွက် စာလုံးများနှင့် ရပ်တည်နေကြသော နိုင်ငံများစွာရှိပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် ထိုကဲ့သို့ ကိုယ်ပိုင်အက္ခရာ ကိုယ်ပိုင်စာပေ အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြင့် အမိမြေမှ ဝေးကွားနေသော မြန်မာလူမျိုးများအဖို့ ဂုဏ်ယူတတ်လျှင် ဂုဏ်ယူနိုင်ဖွယ်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
အခုအခြေအနေတွင် ကျွန်တော်တို့ နောင်လာနောက်သားများကလည်း ယို့ယွင်းစပြုလာသော ကျွန်တော်တို့၏ မြန်မာစာပေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရင်း မြန်မာစာပေ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုများကို မပျောက်ပျက် မတိမ်းကောသွားစေရန်အတွက် ကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှ ကွန်ယက်ပေါ်မှ ပျံနှံလျှက်ရှိသော မြန်မာစာပေပညာရှင်ကြီးများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများကို တတ်နိုင်သလောက် စုဆောင်းပြီး မူရင်းလင့်နေရာများနှင့်တကွ ကျွန်တော် စုဆောင်းထားသော စာပေဟောပြောပွဲ MP3 ဖိုင်များကို ကြိုးစားမျှဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ မူလပိုင်ရှင်များကိုလည်း ကျွန်တော်၏ စုဆောင်းထားခဲ့သမျှ စာပေဟောပြောပွဲများ ပြန်လည်မျှဝေမှုကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပါဟု တောင်းပန်စကားဆိုပါသည်။ တစ်ချို့စာပေဟောပြောပွဲများ၏ မူရင်းများသည် You Tube တွင် တင်ထားသော ဗီဒီယိုဖိုင်များဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်ပေးထားသော မူရင်း Source များတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်က MP3 ဖြင့်ပြောင်းလဲထားပြီး အလွယ်တကူ ဒေါင်းယူပြီး မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Portable Player များတွင် ထည့်သွင်းပြီး သွားလေရာ အားရပ်ချိန်များတွင် လွယ်လင့်တကူ နားဆင်နိုင်ရန် ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆရာအောင်သင်း၏ စာပေထဲမှ လူငယ်သမိုင်း (၁၆.၁၂.၁၉၉၄)
http://www.box.net/embed/bva4ix9bvrlgao9.swfSource: Khin 1978
ဆရာအောင်သင်း၏ ယနေ့လူငယ်နှင့် ယနေ့ရသစာပေ (မကွေး)
ဆရာအောင်သင်း၏ ယနေ့လူငယ်ဘဝ ထူထောင်မှုစာပေ(ပျော်ဖွယ်)
ဆရာအောင်သင်း၏ ဒီနေ့ လူငယ်တွေ(မြန်အောင်)
ဆရာအောင်သင်း၏ လက်ခံလိုက်စမ်းပါ(စာပေလောက) http://www.box.net/embed/atsmyfzl616kafj.swf
မှတ်ချက် ။ ။ ဒေါင်းချင်ယူ နားဆင်လိုပါက ဖိုင်ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ကာ Download ယူသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ထပ် မြန်မာစာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများလည်း ဆက်လာပါဦးမည်။
ဆက်လက်ကြိုးစားပါဦးမည်။ © ချမ်းလင်းနေ
February 20, 2011 at 11:03 pm	>အရမ်း တန်ဖိုး ရှိပါတယ် .. ကျေးဇူး အထူးပါရှင် ..း)မိုးခါး
February 21, 2011 at 2:00 am	>အကို မ သွားတယ်ဗျိုး။ အရင်ရှိတာတွေက ပျောက်ကုန်တာကိုး။း( http://aungthin.com မှာ လည်း ရှိသေးတယ်ဗျ။ ကျေးဇူးပါ အကို။
February 21, 2011 at 4:48 am	>ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဆရာဦးအောင်သင်းရဲ့ စာတွေကို တအားကို သဘောကျတဲ့ ဆရာတပည့်တစ်ယောက်ပါ
Reply	May everybody be happy and healthy!
February 21, 2011 at 5:20 am	>ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကိုကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။
February 21, 2011 at 9:27 am	>လိုချင်တာလေးတွေကို ဒေါင်းသွားတယ်ဗျို့ …ဝေမျှပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပဲ။ နောက်လဲ ကြုံရင် လာဒေါင်းဦးမယ်နော်….
February 21, 2011 at 10:35 am	>ဆရာအောင်သင်းဆိုတာ ဒီလိုရုပ်ရှိသကိုးခင်ဗျာ၊ နာမည်သာ ကြားဖူးနေတာ၊ စုံလင်စွာ ပညာမရှာခဲ့မိလေတော့ မတွေ့ဖူးလိုက်ရဘူးပေါ့၊ ခုမှမြင်ဖူး ကျေးဇူးတင်တယ်လေ၊ ကိုချမ်းလင်းနေ…(ဒေါင်းထားလိုက်တယ်)
February 21, 2011 at 5:54 pm	>တတိယအကြိမ် လာရောက်ပြီး အဆုံးသတ် နားထောင်သွားပါကြောင်း။ ကျေးဇူးပါ။
February 21, 2011 at 8:45 pm	>wow!!! အများကြီးပဲ ပျော်စရာကြီး .. :Dမိုးခါး
>မြန်မာ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမများ၏ စာပေဟောပြောပွဲများ »